Michero Vegetables Washing Processing Machine Line - China Qingdao rakadzikama Machinery
Rabha PRESS MACHINE
Rabha kuvhenganisa MACHINE
Rabha EXTRUDER MACHINE
Rabha AKKU VAC MACHINE
Tsvina Tire Recycling & mugowana Rubber Plant
Rabha kucheka MACHINE
Plastic jekiseni KUUMBWA MACHINE
Rubber Conveyor mabhandi Vulcanizers Welding Machine
Double germinales chiutsi Water Bath dzinodzikinyidza Sterilizer
Muriwo uye Fruit Washer
Water Bath mwaya Milk Pasterization Machine
Electric kana Steam Heat Hot Air Food Kuomesa Machine
Food Automatic chakabikwa Machine
Food Fruit Muriwo Kuomesa hovhoni Machine
Fruit uye Vegetable Cleaning Cutting Kuomesa Machine
Three Pot Parallel Type Food Processing dzinodzikinyidza Machine
Michero Vegetables Washing Processing Machine Line
Michero Vegetables Washing Processing Machine Line iri Sechipanji mune muriwo kubudiswa yemhando pfungwa nyika yakafara, pamwe vakawanda China mudzimba maguta miriwo uye / kana michero kugadzira kugadzirwa. We Vakakurukura yose mutsara miriwo muchero kugadzira michina. The mano zvemichina iri vakasimba. Vegetables vari kucheneswa, akatora, akacheka miriwo, disinfected, vakapedzwa, uye pashure kuongorora, vopinda pamusika mugari mune Mabhokisi diki, uye uende kandini pamusika guru S. ...
Supply Mano: Sets 20 pamwedzi
Payment Terms: T / T, L / C, Western Union
Michero Vegetables Washing Processing Machine Line iri Sechipanji mune muriwo kubudiswa yemhando pfungwa nyika yakafara, pamwe vakawanda China mudzimba maguta miriwo uye / kana michero kugadzira kugadzirwa. We Vakakurukura yose mutsara miriwo muchero kugadzira michina.
The mano zvemichina iri vakasimba.
Vegetables vari kucheneswa, akatora, akacheka miriwo, disinfected, vakapedzwa, uye pashure kuongorora, vopinda pamusika mugari mune Mabhokisi diki, uye uende kandini pamusika package makuru.
Mushure kugadzira, kuti miriwo uye michero vari pamwe chiri yakachena, utsanana, nyore uye njodzi etc.
The dzaFord inogona kushandiswa ribude: makabheji, miriwo, konifurawa, lettuce, makarotsi, howa, mutema pepper, mbatatisi, eggplant, mutema bhinzi, pizi mimwe miriwo.
The muchina wakagadzirwa yepamusoro SUS304 Stainless simbi, maererano National chikafu indasitiri mitemo, kurimwa mutsetse adopts rouchenjeri rwakapetwa / kwesha / mvura pfapfaidzo michina kuti cleam miriwo nemichero kusvika guru pamwero.
The michina mumutsara, kureba iri chinjika nokuchinja kuti casters / uriri vhiri, okisijeni pombi gasi, kuti mvura izere matema Dzakafanana abika. The zununguka of matema kubereka
Ultrasound, saka miriwo nemichero kuwana kuburikidza wakachena pamwe kuvadza pachavo.
Disinfection mutsetse: disinfection nguva inogona kugadzirwa uye akaisa maererano zvizere zvinodiwa vatengi '. Kuburikidza pfapfaidzo uye kugeza nemvura, kuti muriwo nemichero kusangana ekisipoti mureza.
Sprinkler / pfapfaidzo mutsetse: wechipiri akachena shure disinfection, kunze mvura mvura pfapfaidzo.
Kuomesa mutsetse; The zvigadzirwa kuwana kukurumidza nokuomesa, kudzivirira kusvibiswa rechipiri pashure disinfection.
Maererano vanoshandisa 'zvinodiwa kuwedzera ozone mbereko, mukuru kumanikidzwa pfapfaidzo uye bhurasho kufamba kwake / zvakasiyanasiyana.
Kana kushandiswa sezvo desalination rokutsvaira, anogona kushandisa vakawanda vakaisa michina kubata yakasiyana siyana miriwo uye zvibereko.
Previous: Hot Water kufashaira Tank Machine
Next: Three Pot Parallel Type Food Processing dzinodzikinyidza Machine
yezvokutengeserana miriwo wokuwachisa
chibage kubudiswa midziyo
chibage kubudiswa muchina
zuva kugadzira mutsetse
matsva vachiwaridza mudzi muriwo pesin kubudiswa muchina mutsetse
kutsva miriwo nemichero yakatanga Washing rokutsvaira nokuomesa Machine
michero uye miriwo rokutsvaira nokuomesa mutsetse
muchero muriwo kubudiswa michina Washing nokuomesa grading muchina
musha muriwo wokuwachisa
shizha muriwo wokuwachisa
resitorendi muriwo wokuwachisa
mudzi muriwo wokuwachisa
muriwo diki Washing machine
inotapira zviyo kubudiswa muchina
miriwo nemichero wokuwachisa
miriwo muchero wokuwachisa
miriwo wokuwachisa mutengo
miriwo Washing Machine ozone
Pickled Vegetables Desalting Washing Machine
Hot Water kufashaira Tank Machine
Automatic Rice dumpling kufashaira Machine
2018 China rabha muchini kukura
China chikafu michini kukura